Denmark oo qaxootiga ka mamnuucaysa in ay guryaha ka baxaan - iftineducation.com
iftineducation.com – Inta badan baarlamaanka Denmark ayaa taageeray qorshe cusub oo qaxootiga wadankaasi ku nool looga mamnuucayo in ay ka baxaan xeryaha qaxootiga. Qorshahaan ayaa qaasatan ku wajahan dhalinyarada qaxootiga ah, oo lagu soo rogayo bandow.
Ujeedada qorshahaan ayaa lagu sheegay in ay tahay in aysan dhalinyaradaan qaxootiga ah aysan kufsan gabdhaha reer Denmark.
Arintaan ayaa ka dambeysay ka dib markii labo wiil oo qaxooti ah lagu eedeeyay in ay kufsi u geysteen gabdho.
Qorshahaan ayaa ah mid waali ah oo haddii ay dowlada Denmark ay hirgaliso noqonaya mid nolosha ku adkaynaya qaxootiga.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Denmark ay soo bandhigto sharciyo lala yaabay, iyadoo sanadkii hore dhaqan-galisay sharci ay ku baaranayaan qaxootiga oo wixii dahab iyo lacag ah laga qaadanayo qaxootiga.